Fast Speed ​​တံခါးကုလားကာ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Fast Speed ​​တံခါးကုလားကာ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Fast Speed ​​တံခါးကုလားကာ ထုတ်ကုန်များ)
စက်ရုံစျေး Zipper Fast Speed ​​တံခါး
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် PVC Zipper Door (Self repair တံခါး၊ ကိုယ်တိုင် recovery တံခါး၊ Auto recovery တံခါး) သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းအတွက်လူကြိုက်များလာသည်။ လျှောက်လွှာများ: လေတိုက်နှုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်၊ အပူချိန်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆေးဝါး၊...
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်တာဘိုင် Hard Hard အမြန်တံခါးဖွင့်တံခါးသည်နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ခြင်းတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ သံမဏိ Fast Rapid တံခါးသည် ၁ မီလီမီတာကျော်ဖွင့် / ပိတ်၊ ၁...
အရည်အသွေးမြင့်တာဘိုင် Hard Fast တံခါးဖွင့်လှိမ့်
လူမီနီယမ်အလွိုင်းတာဘိုင် Hard Fast တံခါး
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် တာဘိုင်ပြင်းထန်သောမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးသည်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်တီထွင်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။...
စက်ရုံ Fast Roller Shutter တံခါး
PVC အမြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်မှော်တံခါးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်သည်။ အမြန်မြန်မြန်တံခါး၊ Rapid တံခါးသည်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်သာမကသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုရရှိရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ဤ PVC အမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုသင်အသုံးပြုပြီးနောက်သင်သိမ်းဆည်းထားသောအချိန်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။...
လာမယ့် PVC Rapid Speed ​​တံခါး
PVC အမြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုမြှင့်တင်ရန်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးတစ်ခု။ မျက်မှောက်ခေတ်ယှဉ်ပြိုင်မှုအခြေအနေတွင်သင်သည်အခြားသူများရှေ့သို့တက်လှမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်အနိုင်ရနိုင်သည်။ မြင့်မားသောတံခါးသည်သင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုတွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်!...
စက်မှုလုပ်ငန်း PVC Rapid Speed ​​တံခါးကိုတက်ပါ
PVC အမြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းအနေဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်လှိမ့်သောတံခါးသည်နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ခြင်းတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ လျင်မြန်သောတံခါးသည် ၁ မီလီမီတာထက်ပိုပြီးဖွင့် / ပိတ်ခြင်း၊ သက်တမ်း ၁ သန်းကျော်သက်တမ်းရှိသည်။ HongFa သည် ၁၂ နှစ်အတွင်းမြင့်မားသော spped...
စက်ရုံစက်မှု Rolling Up ကိုတံခါး Fast
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမြန် Rolling Up ကိုတံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
လူမီနီယမ်ခက်သတ္တု high-speed Rapid တံခါး
လူမီနီယမ်ခက်သတ္တု high-speed Rapid တံခါး မြန်နှုန်းမြင့်လိမ်တံခါးကို၏အင်္ဂါရပ်ကဘာလဲ? စံပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အပြတင်းပေါက်ကြည့်ရှုအတူ 1)...
တံခါးဖွင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ PVC အလိုအလျောက် Fast Roll
တံခါးဖွင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ PVC အလိုအလျောက် Fast Roll နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကနေသင်ခန်းစာတွေကိုဆွဲခြင်းနှင့်အတူတူပင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဒါကြောင့်အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်လွတ်လပ်စွာ developed.It...
လျှပ်ကာ doors- high-speed ကိုလိမ်
အဆိုပါ counterbalance နှင့်ကေဘယ်လ်စနစ်ကလက်စွဲတံခါးများအဘို့ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်ရှေ့ကိုစစ်ဆင်ရေးပေးပါသည်။ လျှပ်စစ်စစ်ဆင်ရေးအားလုံး client ကိုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အများအပြားအခြားရွေးချယ်စရာအော်ပရေတာရွေးချယ်မှုများထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုပိုကြီးတဲ့ application များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပုဒ်မတံခါးကို overhead,...
လိမ် Air ကို Flow က high-speed ကိုတံခါးများအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ
လျှပ်စစ်စစ်ဆင်ရေးအားလုံး client ကိုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အများအပြားအခြားရွေးချယ်စရာအော်ပရေတာရွေးချယ်မှုများထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုပိုကြီးတဲ့ application များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစံပြင်ပြား 0.5mm အထူ, အရည်အသွေးမြင့်မားဇင့်အပေါ်ယံပိုင်းကနေ BS EN 10147 မှထုတ်လုပ်သောနေကြတယ် ပုဒ်မတံခါးကို overhead...
အလိုအလျောက် Fast တံခါး induction Radar
Supply နိုင်ခြင်း: 1000 sets/month
min ။ အမိန့်: 50 Set/Sets
အလိုအလျောက် Fast တံခါး Radar အသေးစိတ်: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Hofic နည်းပညာ: မိုက်ခရိုဝေ့ Processor ကို အချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်: 0.5s ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: IP54 ထုတ်လွှင့်ကြိမ်နှုန်း: 24.125GHz အများဆုံး installation ကိုအမြင့်: <5meter ထုတ်လွှင့်ပါဝါကိုသိပ်သည်းဆ: <5mw / cm2 ပါဝါစားသုံးမှု: <1W (VA...
PVC ကုလားကာအလိုအလျောက် Fast ကြိတ်စက်တံခါး
PVC ကုလားကာအစာရှောင်ခြင်း Rolling-up, တံခါး နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကနေသင်ခန်းစာတွေကိုဆွဲခြင်းနှင့်အတူတူပင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဒါကြောင့်အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်လွတ်လပ်စွာ developed.It...
အလိုအလျောက် Fast ခေါက်တံခါး Stacking
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack ခေါက်တံခါး ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေး: 1. Frame က: 2MM အအေး-လိပ်သံမဏိ thicknesses ။ 2. မော်တော်: ဂျာမဏီချုပ်ဘရိတ်မော်တာ (ပြင်), ပါဝါ 0.75KW, ပါဝါထောက်ပံ့ရေး 220V ။ 3. ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်က: လျှပ်စစ် box ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျပန်မစ်ဆူဘီရှီ converter နှင့် PLC တင်သွင်း (150% 1HZ) 4. ဖွင့်ပွဲ &...
အလိုအလျောက် Fast တံခါး Radar
ရိုးရှင်းသောလူမီနီယမ် Panel ကိုခက်သည် Fast တံခါး
ရိုးရှင်းသောလူမီနီယမ် Panel ကိုခက်သည် Fast တံခါးနည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ရိုးရှင်းသောလူမီနီယမ် Panel ကိုခက်သည် Fast တံခါး တံခါးကို Frame ကပစ္စည်း: သံမဏိ တံခါးကို Panel ကိုအရောင်: Black က တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် cloding မြန်နှုန်း: Adjustments စံ: အီး, က ISO, SGS command စနစ်: စသည်တို့ခလုတ်ကို...
Fast Speed ​​တံခါးကုလားကာ Fast Zipper တံခါးပေါက် Fast PVC တံခါးဖွင့်ထားပါ Fast Action တံခါးကိုဖွင့်ပါ တံခါး Up ကိုခေါက် Metal Rapid တံခါးများ Rapid ဇစ်တံခါးကိုတက်လှိမ့် တံခါးပေါက်